fanontaniana Prepar3D Help
2 taona 1 volana lasa izay #19 by Dariussssss
Raha hiaina olana, fahadisoana na raha misy fanontaniana momba ny Prepar3D simulator, mametraka izany eto. Koa hilaza aminay mikasika ny fanamboarana sy ny vahaolana ho an'ny olana isan-karazany sy ny fahadisoana amin'izany simulator.
2 taona 3 herinandro lasa izay #64 by lmaselli
Voalohany indrindra no te hiarahaba anareo noho ny asa lehibe ataonareo.
Andro vitsy lasa izay dia nanomboka nampiasa "P3D V3.4", ny voalohany dia nametraka tranga "Balearic Island", ary dia tsikaritro ny olana ny isam-ponina ny tany LEMH sy ny olana momba ny toerana amin'ny LESL.
2 taona 3 herinandro lasa izay #65 by Dariussssss
Miarahaba ary mandray amin 'ny Forum.
Isika dia hanao ny tsara indrindra mba hanampy anao momba ity raharaha ity. Izany toerana manodidina, no alaina eto endrika na toeran-kafa?
2 taona 3 herinandro lasa izay #67 by lmaselli
Dia alaina avy amin'ity pejy ity. Nosy Balearic V2.
2 taona 3 herinandro lasa izay #77 by quietflyerBob
mampamangy maro noho ny asa, dia 'tena fitaovana tsara ho antsika! Aho ny olana amin'ny sasany add-eo, ohatra ny Airbus A300 Multi fanamian'ny entana; I 'Ve napetraka tao amin'ny Microsoft FS Directory, ary miasa tsara. Ankehitriny, dia w'd toy ny hametraka izany entana amin'ny P3D izay hita ao amin'ny iray ihany Files Program (x86) koa, fa ny autoinstaller does'nt aoka aho mba mifidy P3D. Na izany aza, efa napetraka aho fonosana maro hafa avy Rikooo in roa Sims; inona no olana? Misaotra anao nanampy
2 taona 3 herinandro lasa izay #81 by Dariussssss
Nanana fiaramanidina izany entana any FSX ary efa tena tsara.
Tsy azoko tsara ny ara-teknika ampahany amin'ny P3D nefa, dia azo atao fa manana karazana ady amin'ny Sims roa ireo. Hitako ny pics izay toa efa samy nametraka teo amin'ny toerana iray ... fa tsy ratsy izany mba ho azy ireo nametraka tamin'ny aelin'ny mafy samy hafa, raha manao izany ianao dia afaka izany.
Fotoana mamorona pejy: 1.398 segondra